Bible—‘Efi Onyankopɔn Honhom Mu’ Ampa?
Bible​—‘Efi Onyankopɔn Honhom Mu’ Ampa?
WUGYE di sɛ Bible fi Onyankopɔn hɔ? Anaa wususuw sɛ ɛyɛ nhoma bi a nnipa nsusuwii nko ara na ɛwom?
Ɛyɛ asɛm a wɔn a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ Kristofo mpo adwene nhyia wɔ ho. Nhwɛso bi ni. Afe 2014 mu no, wɔyɛɛ nhwehwɛmu bi wɔ United States. Ɛbɛdaa adi sɛ wɔn a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ Kristofo dodow no ara gye toom sɛ ɔkwan bi so no, “sɛ yɛreka Bible ho asɛm a, yɛrentumi nyi Onyankopɔn mfi mu.” Afei nso, nnipa 5 biara mu 1 kaa sɛ Bible yɛ nhoma a “atetesɛm, anansesɛm, abakɔsɛm, ne mmara a nnipa ahyehyɛ na ɛwom.” Nea nnipa bebree reka fa Bible ho yi nti, sɛ yɛka sɛ ‘efi honhom mu’ a, na ayɛ asɛm.​—2 Timoteo 3:16.
YƐKA SƐ BIBLE FI “HONHOM MU” A, ƐKYERƐ SƐN?
Nhoma nketewa 66 na ɛbom yɛ Bible. Nnipa bɛyɛ 40 na wɔkyerɛwee. Wɔde bɛyɛ mfe 1,600 na ɛkyerɛwee. Nanso sɛ nnipa na wɔkyerɛw Bible a, adɛn nti na yɛse ‘efi Onyankopɔn honhom mu’? Yebetwa no tiawa a, asɛm a ɛne sɛ Bible “fi Onyankopɔn honhom mu” no, nea ɛkyerɛ ara ne sɛ, emu nsɛm no Fi Onyankopɔn hɔ. Bible ka sɛ: “Nea efi Onyankopɔn hɔ na nnipa kae sɛnea honhom kronkron kaa wɔn no.” (2 Petro 1:21) Sɛ yɛbɛkyerɛ mu kwan foforo so a, Onyankopɔn nam honhom kronkron so na ɔde asɛm no maa wɔn a wɔkyerɛw Bible no. Honhom kronkron yɛ Onyankopɔn tumi a yentumi mfa yɛn ani nhu. Yebetumi de wei atoto adwumawura bi a ɔreka nsɛm ama ne kyerɛwfo akyerɛw ho. Krataa no mu nsɛm nyɛ ɔkyerɛwfo no dea, mmom ɛyɛ adwumawura no dea.
Wɔn a wɔkyerɛw Bible no, ebinom wɔ hɔ a ɔbɔfo na ɔkaa Onyankopɔn asɛm no kyerɛɛ wɔn. Ebinom nso, Onyankopɔn ma wonyaa anisoadehu. Ɛtɔ mmere bi nso a, na Onyankopɔn de n’asɛm fa dae so ma akyerɛwfo no bi. Ebi wɔ hɔ nso a, na Onyankopɔn ma akyerɛwfo no de wɔn ankasa nsɛm kyerɛw nea ɔpɛ sɛ wɔkyerɛw. Ɛtɔ da nso a, na Onyankopɔn kyerɛ wɔn nsɛm pɔtee a ɛsɛ sɛ wɔkyerɛw. Ne nyinaa mu no, Onyankopɔn nsusuwii na Bible akyerɛwfo no kyerɛwee, ɛnyɛ wɔn ankasa nsusuwii.
Yɛbɛyɛ dɛn agye adi sɛ Onyankopɔn na ɔde ne honhom kaa Bible akyerɛwfo no? Wo deɛ, ma yɛnhwɛ adanse mmiɛnsa a enti yebetumi agye adi sɛ Bible no fi Onyankopɔn hɔ.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan NYAN! No. 3 2017 | Ɛyɛ Ampa sɛ Bible Fi Onyankopɔn Hɔ?